बिल्कुल सबै नयाँ आमा रोमाञ्चकारी एक विषय - एक नवजात लागि डायपर छनौट। तिनीहरूले सुक्खा छाला प्रदान महत्त्वपूर्ण छ, एक कोमलता र राम्रो absorbency थियो, बेचैनी र जलन पैदा गर्दैन। माथिको मापदण्ड अधिकांश Lovular डायपर अनुरूप। ब्रान्ड को स्वच्छता उत्पादनहरु को विभिन्न प्रकार बारे ग्राहक समीक्षा यस लेखमा प्रस्तुत छ। यहाँ हामी डायपर को सबै भन्दा राम्रो मूल्याङ्कन थाह गर्न प्रस्ताव र तपाईंलाई बताउन तपाईं नवजात तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक कति।
अंग्रेजी ब्रान्ड Lovular अपेक्षाकृत हालै घरेलू बजार मा देखा, तर पहिले नै रूसी आमा को भरोसा जीत व्यवस्थित छ। बच्चाहरु को लागि स्वच्छ उत्पादनहरु को लाइन मा सबै तपाईं गुणवत्ता हेरविचार संग बच्चा, डायपर देखि पोंछे गर्न प्रदान गर्न आवश्यक छ। स्वच्छता उत्पादनहरु को उत्पादन मा उन्नत प्रविधिहरू र आधुनिक, वातावरण मैत्री सामाग्री प्रयोग गरेर।
Lovular रूस मा ब्रान्ड को आधिकारिक वितरक "जैविक व्यापार" को छ। खरीद ब्रान्ड उत्पादन राजधानी र रूस को अन्य प्रमुख शहर मा दुवै, प्रमुख खुद्रा चेन स्टोर मा हुन सक्छ। लागत स्वच्छता ब्रान्ड Lovular मूल्यहरु स्थापित "untwisted" डायपर र बच्चा उत्पादन को निर्माता भन्दा बढी छैन।
Lovular देखि बाल हेरविचार उत्पादन
बच्चाहरु को लागि स्वच्छता उत्पादनहरु को निर्माण मा Lovular कम्पनी निरन्तर नयाँ उपलब्धिहरू र विकासक्रम शुरू छन्। यसैले, जलवायु नियन्त्रण प्रणाली जसबाट 45 सेकेन्ड गर्न अवशोषण समय कम, सक्रिय कार्बन संग डायपर प्रयोग गरिएको छ।
ब्रान्ड को विविधता बच्चाहरु को लागि मात्र होइन डायपर, तर अन्य स्वच्छता उत्पादनहरु समावेश:
गीला पोंछे - प्रदर्शन पूर्ण-fledged पानी उपचार असम्भव हुँदा सफाई बच्चा गरेको नाजुक छाला को लागि आदर्श। तिनीहरूले रक्सी र खुशबू निःशुल्क समावेश छैन, नरम Viscose र hypoallergenic बनेको छन्।
डायपर - डिस्पोजेबल डायपर absorbency यो डायपर ती अवस्थामा यो आवश्यक छ जब, उदाहरणका लागि, एक पैदल लागि बच्चा परिवर्तन गर्दा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
स्तन लागि सम्मिलित - राम्रो absorbency, ultrasoft र नर्सिङ आमा को पूरा स्वच्छता प्रदान गर्नुहोस्।
सबै उत्पादनहरु ब्रान्ड बजार मा माल को कमीकमजोरी खातामा लिएर बनाईएको हो। यो निश्चित एक सुखद भावना र सान्त्वना र आमा र बच्चा दिनेछु हो कि स्वच्छता उत्पादनहरु उन्नत।
विशेष गरी Lovular डायपर
डायपर ब्रान्ड Lovular जीवनको पहिलो दिन देखि अधिकतम सान्त्वना र आफ्नो बच्चा को स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहोस्। तिनीहरूले, मुलायम सहज र बच्चाको लागि सुरक्षित छन् र अद्वितीय सुविधाहरू एक नम्बर:
सुपर absorbency। "Lovular" - अवशोषण अधिकतम दर संग डायपर। मिनेट मात्र 45 सबै तरल को डायपर को भित्री तहमा बाँकी छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यो समयमा बच्चालाई गरेको छाला पनि सुख्खा र सफा रहन गर्दा भिजेको प्राप्त गर्न समय छैन।
Hypoallergenic। छाला बच्चा बाह्य stimuli गर्न विशेष संवेदनशील छ। बच्चा को स्वास्थ्य असुरक्षित सामाग्री र व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादनहरु संग सम्पर्क सीमित गर्न को लागि त्यसैले, यो राम्रो हुनेछ।
लिक को अभाव। को खुट्टा र कमर आसपास समस्या लोचदार ब्यान्ड जोगिन मद्दत गर्नुहोस्।
Sterility - डायपर बच्चा जीवन को पहिलो मिनेट देखि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रसिद्ध ब्रान्डहरु को Lovular डायपर सस्ता उत्पादनहरु - मूल्य र गुणस्तर को अधिकतम अनुपात।
प्रकार डायपर Lovular
तपाईं सजिलै पट आफ्नो बच्चा सिकाउन सक्छन् जो संग शास्त्रीय बेबी डायपर र जाँघिया,: ब्रान्ड धेरै डायपर को प्रकार को दायरा:
कोमल Lovular गर्म हावा।
Lovular गर्म हावा स्टेराइल।
डायपर 12Lovular देखि।
सक्रिय कोइला संग बच्चा डायपर।
डायपर जिराफ Lovular।
रात Lovular डायपर जाँघिया।
डायपर को समीक्षा नियालेर। यो objectively लाभ र वर्गीकरण मा प्रस्तुत उत्पादन को प्रत्येक प्रकार को बेफाइदा मूल्यांकन गर्न अनुमति दिन्छ।
को डायपर Lovular गर्म हावा समीक्षा
कोमल र स्टेराइल: हट हावा Lovular कम्पनी को एक श्रृंखला मा डायपर को2प्रकार प्रदान गर्दछ। उनीहरूले जन्म देखि बच्चाहरु को लागि दैनिक प्रयोग उत्तिकै उपयुक्त हो, तर आफ्नै अद्वितीय सुविधाहरू छन्।
कोमल Lovular गर्म हावा डायपर परीक्षण र गश्त बाध्यकारी विशेष Nonwoven देखि निर्मित छन्। यो, सतह हावा र नरम बनाउँछ सान्त्वना र प्रयोग को सुरक्षा प्रदान गर्दछ। कुनै पनि छोराछोरीको आंत्र आन्दोलनहरु बच्चा गरेको छाला सफा र सुक्खा छोडेर, तत्काल अवशोषित छन्।
को नाजुक डायपर Lovular ग्राहक समीक्षा, सबैभन्दा स्पर्श कपडे गर्न सुखद अनुसार। डिस्पोजेबल उत्पादनहरु anatomical आकार, बलियो गम र सहज Velcro छ। को डायपर परिवर्तन गर्दा त्यो आमा सजिलै नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ सूचक भर्नु को निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको।
डायपर गर्म हावा स्टेराइल सतह उपचार को निर्माण मा जसको तापमान 200 ° पुग्छ तातो बाफ, को शीर्ष मा प्रदर्शन गरिएको छ। यसबाहेक sterility आवश्यक ionizing विकिरण, उत्पादनहरु को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ जो प्रदान गर्दछ। यो umbilical घाउ को निको लागि एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्दछ।
को डायपर जिराफ Lovular समीक्षा
आमाहरु कसरी हार्ड यसलाई सक्रिय र संसाधन बच्चालाई एक डायपर राख्दछ थाहा छ। ती बेचैन बच्चाहरु र डायपर लागि विशेष गरी छोटकरीमा को रूप मा जिराफ Lovular आविष्कार गरेका थिए। आफ्नो फाइदा नरम र बाक्लो आफ्नो बेल्ट मा उनको जाँघिया राख्छ र तिनीहरूलाई तल धकेल्न गर्न अनुमति छैन जो नै समय दल, छ। धेरै खरीदारों स्पर्श गम महत्त्वपूर्ण सुविधा जाँघिया Lovular एउटा सुरक्षित र सुखद भनिन्छ छन्।
डायपर, सबैभन्दा आमाहरु को राय मा धेरै लाभ संग छ, कम गम्भीर छैन बेफाइदा। खरीदारों देखि सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाउन कि डायपर-प्यान्ट जिराफ:
स्पर्श गर्न नरम;
राम्रो शरीर र ठोस गम छ;
गर्छन् सुगंध समावेश;
बच्चाहरु चाँडै आंत्र आन्दोलनहरु अवशोषित;
नकारात्मक समीक्षा आमा जाँघिया को गलत anatomical आकार, बेमेल आकार दायरा र निपटान लागि टेप को अभाव संकेत गर्छ।
रात जाँघिया, डायपर Lovular
बच्चा राती दिनमा भन्दा धेरै ठूलो रिसाव सुरक्षा आवश्यक छ। सुखद सूक्खापना र सान्त्वना उहाँलाई बलियो र स्वस्थ निद्रामा दिन। रात Lovular panty डायपर शामिल अवशोषण को एक ठूलो रकम समान भित्र वितरण गरिएको छ। यो के स्थिति बच्चालाई सोता बिना को मलको तत्काल अवशोषण प्रदान गर्दछ: फिर्ता, पक्ष वा पेट मा।
यो मोडेल डायपर बारेमा समीक्षा सामान्यतया सकारात्मक पाइन्छ। निम्न खरीदारों जस्तै डिस्पोजेबल स्वच्छता उत्पादनहरु:
कारीगरी र सामाग्री को कोमलता;
छाला एलर्जी प्रतिक्रिया र जलन को अभाव।
रात-जाँघिया डायपर खरीददारहरू 'धारणा मुख्य drawback, जो अक्सर पर्याप्त हुन, लीक छ।
डायपर Lovular21 मा: ग्राहक समीक्षा
2 1 डायपर Lovular विशेष बच्चाहरु को दैनिक हेरविचार लागि डिजाइन गरिएको छ। तिनीहरूले आमाबाबुको सबै इच्छा पूरा र एकै समयमा बच्चा एउटा सहज भावना दिनुहोस्। अति-पातलो बेबी डायपर तिनीहरूलाई सजिलो र बन्द बनाएर, superelastic गम छ। उत्पादनहरु को किनाराको रिसाव समाप्त जो दोहरी-दल, सुसज्जित छन्।
ultrathin डायपर को ग्राहक समीक्षा 1 मा2हो निम्नानुसार:
उत्पादन प्रेस छैन र RUB छैन, एक नरम भित्री सतह छ;
सहज लोचदार गम;
छाला रीस उठाउनु छैन;
धेरै राम्रो र शरीर गर्न सुखद।
डायपर को बेफाइदा बीच21 मा खरीदारों यसलाई चाँडै धेरै बाक्लो र भारी बन्न कारण डायपर भित्र गरिब absorbency र असमान तरल वितरण उल्लेख गरे। सामान्य अति-पातलो डायपर आमा मा ब्रान्ड उत्पादनको दायरामा सबै भन्दा राम्रो बीच नाम।
सक्रिय कार्बन संग बच्चा डायपर
रूपमा कार्बन सक्रिय बेबी डायपर को एक जोडी पत्र मौका रोजेका छैन। जल कोइला झिल्ली यो चिस्यान कोमल बच्चा गरेको छाला देखि सुरक्षा, गहिरो डायपर मा तरल पदार्थ को एक तत्काल outflow सिर्जना गर्छ। जो ब्लक फिर्ती तरल पदार्थ र गर्मी शिशु गरेको छाला गर्न multilayer सेलूलोज, - को डायपर को अर्को पत्र। अत्यधिक गर्मी, यसको विपरीत, सजिलै बाहिर गर्न micropores को एक ठूलो संख्या संग breathable पत्र मार्फत discharged।
"Lovular" - ग्राहकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै संग डायपर। पहिलो, सक्रिय कार्बन यो जलन र डायपर दाना देखि सुरक्षा, छाला मा एक जीवाणुरोधी प्रभाव छ। दोश्रो, डायपर मा सुगंध समावेश छैन। तेस्रो, छोराछोरीको स्वच्छता उत्पादनहरु पूर्ण चिस्यान अवशोषित र भर्नको रूपमा उत्पन्न गर्दैन। खरीदारों यसलाई भरिएको सूचक र गैर-लोचदार sidewall को बस अभाव रुचि छैन।
नवजात शिशुहरु लागि दर्जा डायपर
यो डायपर को दर्जा आधारित हुन सक्छ बच्चाहरु को लागि सही विकल्प स्वच्छता उत्पादनहरु बनाउन। उहाँले युवा आमा देखि प्रतिक्रिया आधारित संकलित। अवशोषण, शुष्क छाला, कोमलता, दल, हेर्न, Velcro, भौतिक गन्ध, भर्नु सूचक, एलर्जी, जलन र अरूलाई: मूल्याङ्कन डायपर फरक मापदण्ड अनुसार परीक्षण छन् सङ्कलन गर्न। प्रत्येक लागि एक मात्रा मा एक ग्रेड परीक्षण। विजेता अंक अधिकतम संख्या द्वारा अनुमान गरिएको छ।
निम्नानुसार मिति नवजात शिशुहरु लागि दर्जा डायपर छ:
Goon (60 बाहिर 60 सम्भव अंक);
Merries (60 अंक 58 बाहिर);
प्यारा सिरक (60 अंक 55 बाहिर);
Lovular, Moony, Pampers सक्रिय बेबी-सुक्खा, Trudi Trudi ड्राई फिट (54 अंक);
हेलेन हार्पर सफ्ट र सुख्खा, Naty (53 अंक)।
स्तर आधारित यो Lovular डायपर therein 4th स्थान कब्जा गर्ने स्पष्ट हुन्छ। सबै उपाय गरेर, प्रदान स्वच्छता उत्पादनहरु उच्चतम सम्भव दर्जा प्राप्त छ, र मात्र absorbency मा "Quartet" योग्य। डायपर भित्र excreta को राम्रो (तर सही छैन) अवशोषण र आफ्नो वर्दी वितरण ग्यारेन्टी।
एक डायपर को नवजात परिवर्तन कति गर्न?
crumbs को जन्म संग जवान आमा अक्सर विभिन्न समस्याहरू सामना गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई को एक नवजात एक डायपर कति परिवर्तन गर्न छ? त्यहाँ जो अनुपालनको अनिवार्य छ सिफारिसहरू, एक नम्बर हो:
को डायपर बिना बच्चाहरु को उमेर को, को मलको पत्ता लगाउने पछि तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपर्छ।
उमेर मा किनभने यो उमेर छोराछोरीको धेरै अक्सर defecate मा परिवर्तन गर्नुपर्छ हरेक डायपर को03 महिना देखि3घण्टा।
डायपर को312 महिना को उमेर मा समय को एक व्यापक अवधि मार्फत परिवर्तन गर्न, वा कम से कम आफ्नो सामग्री आवश्यक छ।
साथै, डायपर को आवृत्ति पारी व्यक्तिगत बच्चाको छाला, एलर्जी प्रतिक्रिया को सम्भावना निर्भर गर्दछ।
चिकित्सा कान को बाली: डन, लगाउने, हटाउन
कसरी आफ्नो बच्चा संसारको उज्जवल छ बनाउन - नोटबुक लागि कवर?
कटर Nicer Dicer प्लस भान्सा तरकारी
व्हीलचेयर "Marita" - व्यावहारिक, उपयोगी अधिग्रहण
Tricycle "बेबी": मुख्य लाभ, छनौट सुझावहरूको
को बंधन को सुनिंनु: लक्षण र उपचार
कार "लीफान Tsebrium": मालिकको समीक्षा
रूसमा सबैभन्दा राम्रो बर्फ रिसोर्टहरू तपाईंको पर्खिरहेका छन्
एक कार ऋण आवश्यक छ? Gazprombank मदत गर्न खुसी हुनेछन्
Dzheyms Chedvik: जीवनी, फोटो, खोल्ने
रासायनिक सम्बन्ध गाँसिसकेको र यसको गठन को सिद्धान्त
रजिस्ट्री मा ब्यानर हटाउने: निर्देशन
टंगस्टन valence। गुण र tungsten को आवेदन
उदाहरणका समीक्षा, लेखन नियम